३ सय ६५ दिन नै बधाइ थाप्दै नबिताेस्ः बालेनबाट सिक्नाेस् ! - Sero Fero News
३ सय ६५ दिन नै बधाइ थाप्दै नबिताेस्ः बालेनबाट सिक्नाेस् !
सेराेफेराेन्यूज प्रकाशित मिती - ११ जेष्ठ २०७९, बुधवार
स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु भएको छ । २०७९ वैशाख ३० गते भएकाे निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल जेठ ५ शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। नयाँ कार्यकालका लागि भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ को नतिजा केही स्थानमा आउन बाँकी छ ।
नतिजा प्राप्त भएका स्थानमा बधाइ, सम्मान तथा शुभकामनाका नाममा कराेडाैं बजेट खर्च भैसकेका छन् । अहिले केहि संघ, संस्था तथा व्यक्तिहरूले चाकडी गर्न र प्रमुख तथा उपप्रमुखकाे नजरमा रहन केही सम्मानकाे नाटक रच्दैछन् । हाेस् गर्नुहाेस् है जनप्रतिनिधि उनीहरू नै तपाइलाइ फसाउने बाहाना बुन्न सक्छन् । न त घाेषणा पत्रका काम पुरा भएर तपाइलाइ बधाइ दिएका हुन्र भने भन्नु त के नै छ र ? नेपालीमा एउटा उखान चर्चित छ आँफै बाेक्सी आँफै धामी, तपाइकाे नगर, गाउँ वा वडामा अभिभावक भएर आँ===फै सम्मान लिनु उचित छ ? अाफ्नै कार्यक्रममा अाँफै प्रमुख अतिथि कसरी हुन मिल्छ ?
नयाँ जनप्रतिनिधिहरू ७ सय ५३ पालिकामा मेयर/अध्यक्ष ७ सय ५३ तथा उपमेयर/उपाध्यक्ष गरी ७ सय ५३ जना, ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्ष, ६ हजार ७ सय ४३ महिला सदस्य, ६ हजार ७ सय ४३ दलित महिला सदस्य र १३ हजार ४ सय ८६ जना खुला वडा सदस्य गरी ३५ हजार २ सय २१ जना रहने व्यवस्था छ । कतै यि जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकाल भरि नै बधाइ, शुभकामना, सम्मान, धन्यवाद लिएरै बिताउने त हाेइनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेकाे छ । देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडा रहेका छन् ।
बालेन शाह नेपालकाे राजधानी काठमाण्डाैंकाे मेयर बनेका छन् । मेयर बन्नासाथ बालेनले लामाे स्टाटस लेख्दै बधाइ र शुभकामनाले म मेराे घाेषणापत्र पुरा गर्न सकुँ नकि जनतालाइ सडकमा उतारेर फाेहाेर गरेर, बधाइ थाप्दै हिँडेर, समय बर्वाद नपाराैं । तपाइ पनि बालेनबाट केही सिक्ने की ?
जनताकाे जनमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अासेपासे र चाकडीवाजलाइ प्राथमिकता दिएर कार्यकाल गुजारे भने त्यसकाे जवाफ कसले दिने हाे ? भाेट बाकसमा नपरुञ्जेल जनता जनार्दन भन्ने भाेट बाकसमा कैद भएपछि जनतालाइ रैती सम्झने परिपाटीबाट टाढा बस्न सके जनताकाे भाेटले सार्थकता पाउनेछ ।